နေ့စဉ်အိပ်နေတဲ့ သင့်အိပ်ခန်းကို ဘယ်လိုသန့်ရှင်းအလှဆင်မလဲ? - Phoenix Emperor
နေ့စဉ်အိပ်နေတဲ့ သင့်အိပ်ခန်းကို ဘယ်လိုသန့်ရှင်းအလှဆင်မလဲ?
Home / Blog / နေ့စဉ်အိပ်နေတဲ့ သင့်အိပ်ခန်းကို ဘယ်လိုသန့်ရှင်းအလှဆင်မလဲ?
07ဧပြီ 2019 by admin
အိပ်ခန်းဆိုတာ သက်တောင့်သက်သာနဲ့အဆင်ပြေပြေအိပ်စက်အနားယူဖို့သာမက လူတစ်ယောက်အတွက် ကိုယ်ပိုင်နေရာ ကိုယ်ပိုင်အနားယူလို့ရတဲ့ နေရာဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိရဲ့အိပ်ခန်းကိုပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာ အမြဲနေနေကျပုံစံအတိုင်းနေရတဲ့အခါ စိတ်ညစ်ညူးစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိအိပ်ခန်းကိုအသစ်စက်စက်အခန်းမှာပြောင်းနေလိုက်ရသလို ခံစားမှုကိုရရှိစေဖို့ လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုလေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုပါတယ်။
သင့်ရဲ့အိပ်ယာခင်းတွေဟာဟောင်းနွမ်းကြာမြင့်နေပြီဆို ကျန်းမာရေးနဲ့လဲမသင့်တော်တဲ့အတွက် အသစ်လဲလှယ်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ သာမန်သုံးနေကျ အရောင်မျိုးမဟုတ်ပဲ Bright ဖြစ်တဲ့အရောင်လေးတွေ မျက်စိအေးစေမဲ့အိပ်ယာခင်းမျိုးနဲ့လဲလှယ်လိုက်ပါ။
အိပ်ခန်းရဲ့ ဒေါင့်တစ်နေရာရာမှာစာဖတ်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် ကွန်ပျူတာအသုံးပြုနိုင်မဲ့အသေးစားနေရာလေး တစ်ခုပြင်ဆင်လိုက်ပါ။ သင့်အခန်းကိုအသစ်ကဲ့သို့ခံစားရစေမဲ့ အချက်တစ်ခုပါပဲ။
အခန်းကိုလေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်အောင်ပစ္စည်းတွေထားတဲ့အခါဂရုစိုက်ပါ။ နံရံကပ်စာအုပ်စင်အသေး စားလေးတွေထားရှိပါ။ မလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှင်းထုတ်လိုက်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံ အသုံးမလိုတဲ့ ပစ္စည်းတွေဟာ အခန်းကိုရှုပ်ထွေးညစ်နွမ်းစေပါတယ်။